Soloy ny Fikarohana Wordpress amin'ny Google Custom Search | Martech Zone
Soloy ny Fikarohana WordPress amin'ny Google Custom Search
Alatsinainy, Septambra 15, 2008 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Andao hatrehana izany, WordPress Milamina ny fikarohana ary tena tsy marina. Soa ihany fa sady mirehitra haingana no marina ny Google. Ho fanampin'izay, Google's Fikarohana manokana an'ny Google dia nivoatra mba hiditra ao amin'ny bilaoginao (na tranokalanao).
Permalinks sy Google Custom Search
Ho an'ny tranonkala misy permalinks toa ahy dia tsy maintsy nanao fanovana fanampiny iray aho. Tsy maintsy nataoko tamin'ny endrika tag ny endriny fa tsy ny manome ny URL manontolo misy domain.
Google Custom Search dia manana endri-javatra mahafinaritra hafa… hisintona ny sary asongadina raha mampiasa azy ireo ny tranokalanao ary nanatsara ny lohanao amin'ny alàlan'ny microdata mifanaraka amin'ny schema.org. Mampiasa ny Yoast WordPress SEO plugin hikarakara izany - ary ny tranokalako dia havaozina miaraka amin'ny sary asongadina ho an'ny lahatsoratra tsirairay.
Manaova modely pejy valin'ny fikarohana
Valin'ny fikarohana: [Ampidiro eto ny kaody valin'ny fikarohana manokana Google]
Ankehitriny, rehefa manampy pejy vaovao ho an'ny valinao ianao dia safidio ity ho modely:
Tsy hisalasala aho manao an'izany amin'ny bilaogy rehetra - tsy ho an'ny fanatsarana ny hafainganana fotsiny fa ho an'ny valiny mifandraika amin'izany. Azonao atao koa ny mahazo vola roa eo amin'ny sisiny! Topazo maso ny tenanao ary omeo kofehy fikarohana vaovao! Tsy ho diso fanantenana ianao!
Tags: google csegoogle cse wordpressGoogle +foto-kevitrairaika ambin'ny folo amby roapolotelopolo taonawordpress csewordpress google cse
Lahatsary: ​​Inona no hataon'i Seth?
Paikady 5 hahazoana fifantohana amin'ny Internet
Sep 16, 2008 amin'ny 12: 59 AM